Fandraisana - Main - BLI · Sekolin'ny fianarana any Kanada
Chat with us, Ampandehanin'i LiveChat
Nahoana no BLI?
Sekoly fanabeazana fototra sy sekoly ambaratonga faharoa
Ho lasa fianakaviana mpiantrano
Ny fiainan'ny mpianatra
Andro voalohany kilasy
Politika fanararaotan'ny mpianatra
Fanandramana momba ny fitrandrahana frantsay
Anglisy & Frantsay any Canada
Fianarana velona · Fianarana fitiavana
Tianao ho fantatra ve ny saran-dalana?
Toerana mahatalanjona roa
Montreal dia tanàna manokana. Tanànan'ny kolontsaina sy ny kolontsaina. Tanàna iray misy eoropeanina Eoropeana izay hamitaka anao hatramin'ny andro voalohany.
Io no tanàna roa amin'ny fiteny iray any amin'ny nosy iray any amin'ny Reniranon'i St. Lawrence. Io no toerana tonga lafatra hianarana ny teny anglisy sy frantsay ary ny fialam-boly amin'ny kolontsaina.
Na rahoviana na rahoviana ianao no mifidy ny ho avy, dia misy foana mahaliana sy mahafinaritra foana. Na amin'ny fahavaratra, ny lohataona, ny fararano na ny ririnina, dia misy foana ny zava-mitranga.
Quebec dia tanàna mahafinaritra sy mahafinaritra. Izy io no foiben'ny kolontsaina Frantsay any Amerika Avaratra. Ny ampahany Eoropeana amin'ny kaontinanta vaovao. Malaza eo amoron 'ny St. Lawrence River, Quebec dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra eto an-tany sy ny renivohitry ny faritanin'i Québec.
Manankarena ny tantara, ny haitao sy ny fomban-drazana miaraka amin'ny ezaka Eoropeana marina.
Amin'ny maha tanàna lehibe indrindra Canadian izay 100% miteny frantsay, Quebec no tsara toerana Miroboka ao anatin 'fiteny ary tamin'izany andro izany hankafy izay rehetra tsara tarehy ity tanàna ho anao !!
BLI dia manolotra fandaharam-pampianarana maro samihafa mifanaraka amin'izay ilainao. Ao amin'ny BLI dia hahita ny fandaharana tianao.
Ny programa rehetra
Ny departemantan'ny trano fandraisam-bahiny dia manolotra safidy maro ho anao.
Fandaharanasa sosialy mahatalanjona
Mivelatra ny fiteny ianaranao amin'ny fandraisana anjara amin'ny programa sosialy izay manome asa lehibe isanandro.
Azonao antoka fa mahazo ny fanohanana rehetra ilainao ianao mandritra ity fiainana fianarana ity.
Raha mila visa vahiny ianao na fahazoan-dàlana hianatra any Kanada, dia afaka manampy anao amin'ny dingana.
Afaka mikarakara ny fiantohana ara-pahasalamanao izahay, izay tsy maintsy atao ho an'ny mpianatra rehetra tonga eto Canada.
Maka anao izahay ary mandao anao any amin'ny seranam-piaramanidina mba hahatonga ny traikefa hoentinao ho any Kanada ho mora sy mampahery araka izay azo atao.
Izay lazain'ny mpianatra
Iray amin'ireo traikefa BEST izay efa nananako hatramin'izay. Nanana fahafinaretana be aho teto Montreal izay tsy fantatro akory hoe tokony hanomboka. Ny sakafo, ny olona, ​​ny toerana, ny zavatra azonao atao, ny zavatra ianaranao, isan'andro ianao dia mianatra tantara bitika kely ao Montreal amin'ny fomba tena mahafinaritra
Manoro ny 100% aho ary ho avy indray tsy hieritreritra izany indroa
Mpianatra anglisy - Meksika
Rehefa tonga tany Kanada aho, dia tsy nahay anglisy na frantsay. Taorian'ny fandaharan'asa BLI amin'ny fiteny roa, dia nihatsara ny fahaizako miteny amin'ny fiteny roa. Amin'izao fotoana izao dia azoko lazaina fa TSY MISY IZANY
Mpianatra roa samy miteny - Brezila
Nianatra tao amin'ny BLI aho mba hianatra teny anglisy ary lasa mpianatra ambony ao amin'ny latsaky ny volana 6 aho. Tena matihanina ireo mpampianatra ary manome antoka izy ireo hahatakatra sy hianatra izay rehetra ampianarin'izy ireo. Ireo kilasy dia fifanakalozan-kevitra. Ny sekoly dia manana mpianatra manerana izao tontolo izao mba hahafahako manao namana maro.
COPYRIGHT 2017 BLI · Sekolin'ny fianarana any Kanada, TARATASY MAIL HANAO PIRINTY